I-China Ihemodialysis Solution Imveliso yokuveliswa kwemveliso kunye nabathengisi | IVEN
Isisombululo seHemodialysis Solution Production Line:
Ukuhlanjwa komgqomo weHemodialysis yokugcwalisa.
Iinkqubo zoLuhlu lweMveliso yokuSombulula isisombululo seHemodialysis
Umgca wokugcwalisa iHemodialysis
Ukuchaneka okuphezulu: yamkela inkqubo yokugcwalisa ubunzima (i-METTLER TOLEDO yesisindo sokulinganisa), yonyusa ukuchaneka kokugcwalisa. Ukuhambisa ibhola encinci encinci, yenza ukuba ibhotile ibaleke ngokuzinzileyo kukuhambisa.
Isantya sokugcwalisa ivelufa ngokukhawuleza, isiqinisekiso sokugcwalisa ngokukhawuleza kwinqanaba langaphambili ukugcina ixesha lokugcwalisa, kunye nokuzaliswa kancinci kwisithuba sokugqibela sokwandisa ukuchaneka kokugcwalisa. Ukugcwaliswa kwemoto ephezulu-ezantsi, ukunciphisa ukubhobhoza ngelixa uzalisa.
Itreyi eqokelelweyo inyuswe phantsi kokugcwalisa umlomo xa kuthontsiza umlomo. Umbhobho wethu womnwe unemisebenzi evaliweyo / evaliweyo yokuvala umlomo wemilomo, oqinisekisa ukuba akukho kubamba thontsi kwibhotile ngaphandle.
Umatshini uphela ulawulwa ngobukrelekrele, ukufundwa kwenzwa yebhotile, akukho bhotile ayizaliswanga, uyilo lobungqina bokuphazamiseka kwisitya ngasinye.
Izinto zombane zamkela i-French Schneider, njenge-PLC, i-HMI, inverter kunye ne-breaker. ukudibanisa ulawulo lomoya, ukuzinza, ukhuseleko, ukusetyenziswa okuluhlaza kunye nokusetyenziswa okuphantsi.
Umatshini ugqunywe ngokupheleleyo yi-SS304, ucango lweglasi olunobunkunkqele, ukulungeleka okungcono kweentlobo ezahlukeneyo zokusingqongileyo, anti-bako kunye nokucoceka ngokulula.
Inkxaso yombhobho CIP / SIP
Egqithileyo Isisombululo sePeritoneal Dialysis Solution (CAPD)
Okulandelayo: Iprojekthi ye-IV yokuThambisa iBhotile yeGlasi yokuThambisa
Umgca weHemodialysis Solution Production Line 、 HD Dialysis isisombululo sokugcwalisa
Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led,